Xog cusub oo aan wanaagsaneyn oo kasoo baxeysa xaaladda Xasan Daahir |
Xog cusub oo aan wanaagsaneyn oo kasoo baxeysa xaaladda Xasan Daahir
Sarkaalka mayalka adag ee gacanta ugu jira dowladda Soomaaliya Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa la soo sheegayaa in xaaladiisa caafimaad ay aad u liidato kadib markii cadaadis dheeraad ah ay saarteen Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo laamaha sirdoonka reer galbeedka.
Warar aynu helnay ayaa sheegaya in Sheekh Xasan Daahir uu iska diiday in ay damaanad ku qaaddo dowladda Qatar oo muddo dheer waan-waan ka dhex waday Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo Madaxda Somaliya.
Sidoo kale waxaa wararku sheegayaan in Xasan Daahir uusan wali ka laaban mabda’iisi ahaa in la sii wado dagaalka “Jihaadka” uu ku sheegayo ee Al-Shabaab kala wareegtay isaga.
Sheekh Xasan, oo hab baxsad ah ugu gacan galay dowladda Federaalka ayaa haatan waxaa mugdi weyn uu ku jiraa mustaqbalkiisa siyaasadeed, waxaana quus jooga reerka uu ka dhashay oo ku fashilmay inay ku qanciyaan inuu nabad qaato.
Dowladda Somaliya ayaa horey u saamaxday hogaamiyaal sare oo ka soo goostay kooxda Al-Shabaab sida hogaamiyihii buuraha Gal-Gala Maxamed Saciid “Atam” iyo Sakariye Ismaaciil Xirsi oo amniyaadka u qaabilsanaa malleeshiyada Shabaab.